MFP HP LaserJet Pro M125r: incazelo, izici kanye nokubuyekeza
Njengoba umkhuba ubonisa, umthengi yasekhaya wathatha cishe eyishumi ukuqonda ukuthi laser ihhovisi akuyona okunethezeka, kodwa ithuluzi esikhulu imisebenzi yanoma yimuphi yinkimbinkimbi ekhaya nasemsebenzini ezindaweni. Nokho, ngaphambi kokuba abathengi ezingaba kwavela enye inkinga: kanjani ukukhetha idivayisi ukuphrinta, ngoba emakethe kukhona eziningi ezihlukahlukene imishini, esesikhundleni kokuhlukanisa ukusebenza nje kuphela, kodwa futhi intengo.
Umnqopho we kulesi sihloko - MFP HP LaserJet Pro M125r. Lokhu idivayisi multifunction ibekwe ezimakethe zomhlaba njengoba umngane engabizi ekhaya futhi ibhizinisi elincane. Umkhiqizo ibekwa ingxenye intengo isabelomali futhi ngokuyinhloko sigxila amakhasimende ngenkani, abasazisayo lula futhi sikwazi ukwenza izinto ezihlukahlukene imishini ehhovisi.
HP imikhiqizo alidingi isingeniso. Ukubona phambi inqubo ummeleli America, priori, umsebenzisi bangathembela eliphezulu MFP HP LaserJet Pro M125r.
Incazelo iyiphi idivayisi njalo iqala isembozo. Lapha abakhiqizi emhlabeni odumile baye bazama ukwenza konke okusemandleni ukuze qiniseka ukujabulisa umsebenzisi - ibhokisi elimibalabala, ivikeleke kakhulu kusuka uhlevane futhi lehla kakhulu ubuchwepheshe futhi imishini ocebile.
ukunakekelwa okukhethekile ufanelwe lokuvikeleka kwezifiso ezisemqoka ezingumphumela abasebenzisi ezihambayo iphrinta. Ukuzama ukugwema MFP umonakalo ngesikhathi zokuthutha, ubuchwepheshe yenkampani ngampela ingu Wanamathela wonke tape iphrinta. Yebo, ngezinye amaziyo kuqala ubuchwepheshe, ngokusho umbiko lomsebenzisi, ngisho noma kukhona omubi ngakho, kodwa ikhambi elinjalo Siyaqiniseka ukuvikela imishini yokunyathelisa isuka uthuthumele phakathi zokuthutha.
abathengi abaningi banesithakazelo hhayi yangaphandle ubuhle ukuphrinta ubuchwepheshe, futhi lula ukusetshenziswa nokusebenza. Ngakho-ke, akumangalisi ukuthi lapho ukuhlangana ne MFP HP LaserJet Pro M125ra ru, abasebenzisi abaningi baye babika ukuthi umenzi uvelile wonke amathemba. Kungcono ukuqala nge kusakhiwo - idivayisi multi-function unamahlangothi compact ngempela. Eqinisweni, iphrinta ingafakwa kuphi, futhi nakanjani ngeke ubani ukugxambukela.
Ngokuqondene quality Yakha ke lapha bonke abasebenzisi yinto emnandi ababengayilindele. Ake IFIs futhi okungavikelwe kusukela amagalelo, kodwa umzimba wakhe namanje uqine ngokwanele. Ngesikhathi kokuhlinzwa, akunakwenzeka ukuba ngivule izingxenye sangaphakathi ezenzweni ezingalungile (kokufaka igobolondo, sisebenze ugqoko iphepha, isivalo isithwebuli, control panel izinkinobho).
HP LaserJet Pro M125rnw oyingqayizivele MFPs ithengiswe bonke abasebenzisi ukwenza imisebenzi eyisisekelo. Sikhuluma sezindawo kudivayisi ukuphrinta. Ngokwemvelo, iningi abathengi ezingaba abakhethe umkhiqizo inikezwe ekhaya futhi ibhizinisi elincane, senyanga isithakazelo umthwalo iphrinta. Lapha iqala lezimanga kubasebenzisi.
kudivayisi Akubizi (amanani cishe ama-ruble ayizigidi eziyishumi) Ungaphrinta inyanga Amakhasi ecishe ibe yizinkulungwane 8-10. Futhi leli nani liphindeke uzwakalise ngumkhiqizi. Ordinary ekuqaleni shazi MFP mikhondo emakhasini 20 ngomzuzu ngokulungiswa esiphezulu 600 x 600 dpi. izinkomba ezinjalo nobuntu imishini ezibizayo.
Okuwukuphela engalunganga, njalo udonsa ukunakwa cishe bonke abanikazi idivayisi, - ukuntuleka Duplex esakhelwe ngaphakathi. Lo mfundi, uzovuma ukuthi ukuyiprinta nhlangothi zombili zihlale funa hhayi kuphela ebhizinisini kodwa futhi ekhaya.
Ukuba yizinhlobonhlobo idivayisi inikeza isithwebuli flatbed, esinomthwalo ejwayelekile A4 format futhi ifakwe CIS-inzwa. Prakthiza ebonisa ukuthi amadivayisi abanjalo bangabaphostoli kakhulu funa ezimakethe ehhovisi, ngoba kanye eziphansi bayakwazi ukubonisa imiphumela emihle yomsebenzi wabo.
Okokuqala, sikhuluma usayizi wesithombe ngesikhathi ukuskena. Kuyinto 1,200 x 1,200 dpi. Lesi sibalo kwanela ukusingatha hhayi kuphela umbhalo, kodwa futhi izithombe umbala. MFP HP LaserJet Pro M125r cz177a isekela Twain ejwayelekile futhi WIA, futhi ngokufanelekile, kungenziwa eziqhutshwa ngaphandle umshayeli ayo, enikeza ukulawula isofthiwe ezikhethekile. Ngakho, ukuhambisana ngokugcwele kudivayisi ukuphrinta nge yiluphi uhlelo lokusebenza.
Laser printer nge isithwebuli edidiyelwe - umshini umnyuziki ikhophi. Ukuze enembile, le imishini yokukopisha, ngoba eqinisweni "Xerox" - sha efanayo ne-HP. Kushiwo iphrinta futhi isithwebuli izici umsebenzisi ngeke ngokungananazi esiphethweni ukuthi imishini yokukopisha uyakwazi ukuhlangabezana zonke izidingo zakhe. Nokho, lapha umfundi kuyodingeka akudumaza.
Umkhiqizi, uzama ukufika isivinini phezulu yokukopisha amadokhumenti, kakhulu ziyancipha isinqumo lapho kuthwetshulwa idokhumenti. Ngenxa yalokho, esikhundleni elindelwe 1,200 x 1,200 umsebenzisi dpi uthola dpi 400 x 600 kuphela. Ngalezi imingcele MFP HP LaserJet Pro M125r ukwazi ukudala amakhophi emakhasini amabili ngomzuzu, kodwa abanye abasebenzisi izikhalazo mayelana izinga ukuphrinta uma usebenzisa i-zoom. Hhayi ngokuphelele esicacile abanikazi idivayisi futhi uprinte imikhawulo yokukopisha imibhalo - e idivayisi olulodwa pass uyakwazi ukunikeza amapulani ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye kuphela.
Abasebenzisi abaningi baye baqaphela kakade, ukuthi kudala izinsuku lapho ijubane ukuphrinta kakhulu kuthinta ukusebenza PC. Isimo kwashintsha ngokuphelele - manje ukucutshungulwa okusheshayo nowokunyathelisa zingenzeka kuphela khona yezingxenye abafanele kakhulu imishini ehhovisi. Sikhuluma processor enamandla kanye nenani RAM. I MFP HP LaserJet Pro M125ra ukukhwezwa crystal, clocked at 600 MHz 128 MB inkumbulo DDR. Njengoba umkhuba ubonisa, lo mqulu kwanele hhayi kuphela ukuphrinta amafayela amakhulu ihluzo, kodwa futhi ukuba asingathe noma yisiphi emgqeni ukuphrinta.
Omunye futhi ekwazi ukusho ukuthi kungenzeka font okusheshayo lapho ukuyiprinta ukucutshungulwa, kodwa iphrinta Postscript akusekeliwe hardware. Akuve eziyinqaba, ngoba idivayisi ibekwe njengoba umkhiqizo multi-purpose amabhizinisi amancane.
Ergonomics nemitfombolusito kwencika
Kodwa HP LaserJet Pro M125r MFP ibusa ugesi njengoba ummeleli wehhovisi kweqiniso. Wekuphrinta ephelele idinga 465 Watts - lena sibalo esiphakeme kakhulu ngisho iphrinta laser. Angiyithandi abanikazi kanye ukusetshenziswa eceleni - 2.2 watts. Ngakolunye uhlangothi, uma usetha umsebenzi ukuphrinta nokuqhutshwa idivayisi multifunction okuphuma ngaphandle kokungabaza.
Njengoba lula ukusetshenziswa, lapha nomkhiqizi unqume ukusiza umnikazi ukuze ubhekane ngokuphumelelayo nalesi MFP usebenzisa panel control futhi okucaciswe luketshezi. Ngaphezu imisebenzi eyisisekelo kwesikrini iphrinta ungabika amaphutha kanye kukuphi. Ergonomics iphrinta ukubuyekeza, abanikazi Awunawo banombono ongemuhle, futhi olumnandi ngempela.
Uma sikhuluma impendulo alivumi mayelana HP LaserJet Pro M125r MFP ukubuyekezwa. Cartridges ezinikezwe ngedivayisi ifakwe chip nokuphathelene elawula ukusetshenziswa toner futhi uyakwazi ukuvimba iphrinta. eyikhulu amaphesenti abasebenzisi sokungenela phezu ingxenye nomkhiqizi akathandi, kungakho okungekuhle. Xazulula inkinga ngezindlela eziningana - uthenga igobolondo entsha, setha i-chip "kwesokudla" noma kabusha lock iphrinta hardware.
I okufana ne uvula chip iyona elilungile kakhulu, ngoba iqeda nkinga unomphela zonke. Ngaphandle chip ke kusekelwa iyiphi igobolondo ukuthi iyahambisana idivayisi.
Babhekwa ku MFP
Njengoba umkhuba ubonisa, zikhona ezinye izinkinga esikhathini MFP HP LaserJet Pro M125r. Cartridges neqoqo chip zivezwe, kodwa esakhelwe Iseluleki Sokufaka Iphrinta Yenethiwekhi ukuthi ayisebenzi kahle, bebodwa kungukuthi lalungiswa. Kulokhu sikhuluma module-Wi-Fi. Kuyacaca ukuthi umenzi uzama ukwenza ukusetshenziswa iphrinta elula, kodwa module engenantambo ukulimaza sha owaziwa kuphela.
Lapho ebaleka lokuqala ngokuphelele iphrinta kuyinto iyiphi idivayisi ngaphandle kwezinkinga ngisho sibopha kunyatheliswa ikhasi test. Kodwa sidinga kuphela ukuphuma ukufinyelela Wi-Fi, futhi ngokubambisana amayunithi ubhujiswe. Inkinga kuthinta amadivayisi eselula kuphela uhlelo lokusebenza Android noma i-iOS. Ukufuya PC ne-Windows ungakhathazeki.
Amadivayisi anjalo multifunction njengoba MFP HP LaserJet Pro M125r, ngaphandle isizathu ebizwa ngokuthi "workhorse". Iqiniso lokuthi umkhiqizo ezishibhile uyakwazi okubhekana nanoma isiphi umsebenzi (wokunyathelisa, ukuskena, ukukopisha), kodwa iningi abanikazi ezifana siqu futhi akudingeki amadivaysi. Ungakwazi Ngokuqinisekile kokugxeka ukusebenza kwe-Wi-Fi noma uqale ingxoxiswano izinkinga nge chip phezu igobolondo, kodwa lena inkinga we plan yesibili, okuyinto ekilasini isabelomali kungamukelwa ngisho ukunaka. Futhi uma sikhuluma amaphutha amabi kakhulu obugebengu, kungcono ukuba uthinte ku ukuphrinta amabili emaceleni ezingeni hardware, yiso kanye lesi kakhulu ukusebenza funa ezimakethe zasekhaya.
Indlela ukuxhuma laptop yakho laptop yakho ngaphandle kwezintambo futhi nge-Wi-Fi, i-HDMI ne-USB
Indlela overclock wokugaya AMD?
Kungani computer yami kungaqali? Step by step Umhlahlandlela ukuqeda zokugwema ukuphuka
Intel G1610 Celeron incazelo processor, izici kanye nokubuyekeza
WiFi repeater - idivaysi zandisa isignali
Kappa kusukela bruxism: kahle, izici zohlelo lokusebenza, imibono kanye nokubuyekeza
Njengoba zaparoleny WiFi. Ukubeka iphasiwedi ye-WiFi. amaphasiwedi Standard WiFi
Biathlon Academy (Krasnoyarsk). Kuyini?
Accounting Services ihlinzeka eziningi. Ubani ukuthemba?
Isilinganiso sobudala intsha, noma Indlela yokugwema izinkinga yokukhula
Umuthi "Smecta" Izingane yokusetshenziswa kanye nencazelo
Moliere: Biography iDemo nemisebenzi
Entsha Volkswagen Jetta
Imbali wavele nge ukunambitheka Moschino Funny